AMD FidelityFX Super Resolution yakavhurwa sosi | Linux Vakapindwa muropa
Chimwe chezviziviso zvaitarisirwa kwazvo kuComputex 2021 chaive che AMD uye nhau dzayo dzeGPU. Iyo kambani yakaunza tekinoroji FSR (KutendekaFX Super Kugadziriswa). Nayo, inotarisira kukwikwidza neNVIDIA DLSS, asi chinhu chakanaka nezve AMD ndechekuti yakavhurwa sosi, saka nharaunda ichakwanisa kupindira mukusimudzira kwayo, kugadzirisa uye kutakurika.
AMD yanga ichibheja pane yakavhurwa sosi mapurojekiti kwenguva yakati, nekuti ichiziva kuti ivimbiso. Pasina kuenda kumberi, nekuda kwekuti kambani iyi yakavhura iyo Mantle API kodhi, isu tine izvozvi Vulkan ane simba. Zvikasadaro, iwe unenge uchiri kungovimba chete paOverGL.
AMD yakaratidza kudada FidelityFX Super Resolution yekuvandudza mashandiro emangwana rayo Radeon mifananidzo yemakadhi. Uye, nekuti iri rakavhurwa sosi purojekiti, kuenderana hakuzove dambudziko rakakura, nekuti nharaunda inozotarisira kuitora kwazvinodiwa.
Uye zvakare, iyo yakanaka ndeyekuti AMD FidelityFX Super Resolution ichakwanisawo kushanda pa nvidia mifananidzo yemakadhi, saka hazvisi izvo. Izvo zvinongoenderana nekambani yakasvibirira kukwidziridza yavo Hardware yeFSR (chimwe chinhu chingangoitika hachizoitika). Ivo vakazvipira kuDLSS (Kudzidza Kwakadzika Super Sampling), tekinoroji yakasiyana neFSR, asi mhedzisiro yacho yakafanana, ndiko kuti, kuwana resolution yepamusoro pasina penalizing speed (FPS).
Uye zvakare, mune iyo NVIDIA, sezvazvinowanzoitika mune iyi firm, iri kodhi yekutengesa. Iyo giraidhi kambani ine izere kutonga kwayo, uye inoshanda pamwe nevakabatana kuti iite iyo mumavhidhiyo mitambo. Chinhu chisina kunaka kwazvo pamitambo yeLinux uye nekuchinjika kweiyi imwe tekinoroji, kubvira kuvhurwa kwerudzi urwu rwepurojekiti kunounza tariro nyowani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » AMD FidelityFX Super Resolution yakavhurwa sosi
ALPACA, mhando nyowani yeMurume mukati kurwisa muHTTPS